Soo dejisan Tinder 9.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Tinder
Tinder – waa barnaamij loogu talagalay dadka taqaanno dhamaan dadka aduunka oo idil. Tinder waxay awood u leedahay in ay raadiso dadka isticmaala, kuwaas oo ku dhow, qiimeynayaan sawiradooda iyo xiriirinta farriimaha qoraalka. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sheegto xuduudaha raadinta dadka sida galmada, masaafada search iyo parameter da’da. Tinder waxay go’aamisaa meesha hadda jirta waxayna bixisaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dadka isticmaala, kuwaas oo ku hareereysan. Software wuxuu awood u leeyahay in uu sawiro sawiro iyo la wadaago dadka kale.
Dadka la kulma dunida oo dhan
Raadi kuwa isticmaala kuwa dhow
Go’aaminta goobta hadda
Soo dejisan Tinder
Faallo ku saabsan Tinder
Tinder Xirfadaha la xiriira